Trust Offshore - Benefits, Fiarovana ara-bola, Fitsipi-pifehezana & Fananganana
Trust Offshore for Protection
Maro ny manam-pahaizana miaro ny fiarovana Offshore trust ao amin'ny fahefana voafidy araka ny tokony ho izy ny fiarovana mafy fiarovana mahery vaika eran-tany. The Nosy Cook Ny Trust dia naseho nanolotra ny lalàna matanjaka indrindra amin'ny fiarovana ny tranga. Izany no piadiana juridiction ho fiarovana ny fananana araka ny hevitray. Andao atao hoe ny fitsarana eo an-toerana dia mitaky ny fandoavana. Aza hadino hatrany fa ny orinasam-pitokisana ao amin'ny Cook Cook izay hita any ivelan'ny fitsarana. Noho izany dia tsy voatery hanaraka ny baikon'ny fitsarana ny mpitantana (izay mazàna ny lalànan'ny lalàna any ivelany). Vokatr'izany dia nahazoan-dàlana, nafatotra, ary nanome antoka 30 + taona Trust company mitazona ny fanananao amin'ny fomba ratsy. Ho an'ny mpanjifa fiadanan-tsaina dia mametraka orinasa tsy miankina iray orinasa (LLC) izay 100% izay natokan'ny fitokisana. The Ny client dia mpitantana ny LLC.
The Ireo kaonty dia natao ao amin'ny orinasa iray ao amin'ny banky iraisam-pirenena azo antoka. Ny mpanjifa dia ilay sonia amin'ny kaonty banky rehetra. Rehefa tonga ny “zavatra ratsy” ary mety ho tratry ny fitsarana ireo fananana. Araka izany dia afaka miditra ao amin'ny maha-mpitantana ny LLC ny mpitam-pitokisana. Izany hoe, ataon'izy ireo ny vola naloanao ilay orinasam-pitokisana - arovy ny fanananao. Vantany vao lasa ny fandrahonana ara-dalàna dia haverina amin'ny maha mpitantana ny LLC azy ny mpanjifa miaraka amin'ireo fananana mbola mitoetra. Ny fikarohana nataonay dia naneho fa ny fahatokisan'i Cook Islands voalamina tsara dia miaro ny fananan'ny mpanjifa amin'ny fanamby ara-dalàna rehetra.
Fampandrosoana am-pianarana any ivelany
An Ny fitokisana avy any ivelany dia tena toy ny fitokisana nentim-paharazana. Raha izany dia misy fifandraisana na fandaminana eo amin'ireto antoko manaraka ireto: ny "Trustee (s)," "Settlor (s)," ary "beneficiary (ies)." Ny fanomezana dia atao amin'ny antontan-taratasy mifamatotra sy voasoratra. Antsoinay hoe "Fanatokisana ny asa." Ity fitaovana ara-dalàna ity dia afaka mitazona lohateny amin'ny fananana sy fananana. Izy io dia afaka mitantana ireo fananana mifanaraka amin'ny taratasy fahazoana antoka. Ho fanampin'izany, afaka manome tombony ary fizarana olona na vondron'olona iray. Ny fitokisana no manendry ireo olona ireo ho mpahazo tombony. Ity ny fahasamihafana. Aoka hatao hoe mpitsara iray ao amin'ny fanjakana iray no mitaky ny hamerina ilay vola. Soa ihany ho anao, ny mpiasan'ny fampanoavana (ny biraon'ny lalàna momba ny lalàna any ivelany) amin'ny fanjakany vahiny dia tsy voatery hanaraka izany.
Ny mpitandrina sy / na ny orinasam-pitokisana dia misahana ny fitantanana ny fitokisana. Voafatotry ny adidy tsy azo ivalozana izy ireo hanohana ny fifanarahana. Amin'ny alàlan'ny sonia ilay antontan-taratasy dia mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fepetra takian'ny alàlan'ny fikambanam-pitokisana izy ireo. Ny fifampatokisana dia tsy mitovy amin'ny orinasa na fototra. Ity karazana fahatokisana ity dia fifanarahana voasoratra. Izany dia mamaritra fa ny mpino mba hanomezana tombony ny mpandray tombony sy hiarovana ireo vola avy amin'ny mpihaza.
Manapa-kevitra ny hamorona fitokisana Asset amin'ny fiarovana any ivelany
Voalohany dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra amin'ny fananganana ilay fifampitokisana. Avy eo, ny settlor dia tsy maintsy misafidy ny karazana toky tiany hamboarina. Anisan'izany ny faharetany, izay mety haharitra mandrakizay. Ny settlor koa dia (handray ny fanampiantsika) handray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny famaritana ny antsipiriany. Ireo antsipiriany ireo dia misy ny manapa-kevitra raha haverina ny fifampatokisana na tsia. Anisan'izy ireo ny hanao izany na tsia ny fahatokisan-tena. Ankoatr'izay, dia mamaritra ny zon-tsika, adidy, adidy ary andrasana amin'ny tompon'andraikitra.
Ankehitriny dia andao hamaly ny fotokevitra natokisan'ny fanavaozana na tsy azo ovana. Na dia toa ny anarany aza aza, ny fahatokisana azo averina dia azo esorina na oviana na oviana amin'ny fotoana voafaritry ny settlor. Raha afaka izany, izy ireo dia afaka manana vanim-potoana efa voafaritra mialoha (na afaka maharitra mandrakizay) tsy misy fepetra hamerenana azy ireo. Izany hoe, mety na tsy hanatsoaka hevitra arakaraka ny voambolana noforonina araka ny voafaritra ao amin'ny tsikaritra fitokisana.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny fahatokisan-tena matanjaka dia mety ho latsaka amin'ny sokajy roa, ary voafaritra ho fahatokiana manana fahaiza-manavaka be dia be amin'ny fanajana ny fomba hanomezan'ny mpitantana ny fizarana ireo olona mahazo tombontsoa, ​​ary manome izany aza, amin'ny tranga sasany, ny mpitam-bola manana zo hanendry na manampy mahasoa. Izany dia manala fahefana be dia be amin'ny Offshore trust ho an'ny tompon'andraikitra iray, na izany aza, ary manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana tsara ny mpitam-po mahay sy tsara fanta-daza na tompon'antoka amin'ny fahatokisana miaraka amina fanamarihana tsara, laza mendrika, ary ny traikefa ilaina mba hahombiazana sy amim-pahatokiana sy hanomezam-boninahitra ny voambolana mahatoky .
Tombontsoa avy amin'ny Trust Offshore
Ny fametrahana ny fananana sy ny lohateny amin'ny fananana ao amin'ny fitokisana dia ny toerana misy ny liona amin'ny tsiambaratelo ary ny fiarovana amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fidiran'ny tompon'andraikitra an-dranomasina. Raha ny lohandohany ara-dalàna no mizotra amin'ny mpangataka, izay tsy maintsy manatanteraka ny adidy miorina amin'ny fitokisana. Ny tanjon'ny fitokisana dia ny hanomezana ireo mpandray tombony, izay mety ho ny settlor, ary matetika, ny mpandray anjara voatanisa. Ireo mpandray tombony ireo dia manana zo matanjaka be momba ny tombontsoa amin'ny fitokisana ary ny ankamaroan'ny juridictions dia manaiky fa ny Ny tanjona dia ny manome ny tombontsoa, ​​araka izay voafaritra ao amin'ny tolo-keviny, ho an'ireo mpandray tombony ireo ary panjakana rehefa misy fanontaniana momba ny fitantanana ny fitokisana.
Satria ireo fidiram-bola ireo dia saika hita matetika any amin'ny haba hetra na fiarovana ara-barotra miaraka amin'ny Ny lazany ho fiarovana ny fananana sy ny tsiambaratelo tsara indrindra, ny tombontsoa azo avy amin'ny fitrandrahana ala ihany koa dia avy amin'ireo endri-javatra ireo. Ny vola azon'ireo tompon'andraikitra amin'ny alàlan'ny sehatra dia ny ankamaroany tsy misy ny enta-mavesatra ara-dalàna indraindray Azo ampiharina any amin'ny tanindrazan'ny fitondram-panjakana na ny fitsarana. Raha natsangana ny fitokisana mba handraisana ny tombotsoan'ny olona nametraka ny fitokisana sy / na ny mpivady, ny ankizy na ny mpandova ny tanàna, ohatra, ny fitokisana an-dranomasina mety hanome fialokalofana avy amin'ny fandalovan'ny lova mafy. Ho an'ny vahoaka amerikana, ny fahatokisana ny fiarovana ny fananana any ivelany dia tsy miandany amin'ny hetra. Izany, tsy mampiakatra na mampihena ny hetra alainanao.
Ankoatra izany, mifototra amin'ny fanabeazana azy ireo amin'ny fiarovana ny seranan-tsambo voaaro, ny fikambanana tsy miankina ny tsiambaratelo tsy manam-paharoa, ny fiarovana amin'ny loza ateraky ny ady an-trano sy ny andraikitra sivily, ary na dia avy amin'ny zavatra toy ny fisaraham-panambadiana na ny famoizana raharaham-barotra aza. Ampiasain'ny maro koa izy ireo mba hiarovana ny fananana amin'ny raharaha ara-pitsarana ara-politika na ara-toekarena. Sarotra be izany, raha tsy hoe misy fiampangana amin'ny heloka bevava mahery vaika, ho an'ny vondron'orinasa iray ivelan'ny tranon-tsarimihetsika tsy miankina amin'ny sehatry ny tsiambaratelo. amin'ny ankamaroan'ny juridictions.
Aiza no hanorenana Trust Offshore
Ny fahatokisan-tena any ivelany dia matetika miforona amin'ny fivarotan-ketra ambany na fananana azo antoka izay manana laza ho an'ny fahombiazana mahomby sy ny fanatanterahana ny fifampatokisana sy vola tahiry. Na izany aza, tsy ilaina amin'ny toerana mety ho toeram-pivarotana hetra na fahazoan-dàlana lax - ny maro amin'ireo fahefana mifehy ny fifampatokisana mahomby sy ny firenena dia manolotra fanta-daza, orinasa matanjaka manana traikefa ary manana tsiambaratelo tena lehibe sy ampinga ampinga lehibe.
Ny iray amin'ireo manaram-piangonana iraisana dia ny hoe apetrak'ireto teratany ireto ny fitsipiky ny fitokisana sy ny lalàna momba ny lalàna iraisana anglisy - izany satria ny hevitra momba ny fananganana fitokisana dia hevitra anglisy taloha hatramin'ny andron'ny Krusades. Ny sehatra hafa eropeana hafa izay manome ny fitantanana fitokisana mahomby, toa an'i Luxembourg, Malta, Switzerland, sns., Dia nampifanaraka ny lalàny sy ny fitsipiny mba hifanaraka amin'ny modely fitantanana matoky tena napetraky ireo izay mifototra amin'ny lalàna mahazatra anglisy. Ireo jurisdictions izay misolo tena ny ambiny amin'ny fiarovana ny fiantohana dia ny nosy Cook, ny Matoky i Nevis ary ny iray tany Belize, tamin'io baiko io.
Ny fananganana fitokisana tsy miankina dia mitaky ny fanatratrarana ny tanjona sy ny tanjon'ny kolon-tsaina mety hitranga, ary hanangona loharano sasany amin'ny fametrahana sy ny fikojakojana azy. Noho izany, fikarohana lalina, sy fikarohana, ary Ny torohevitra sy ny fanampiana avy amin'ny traikefa matihanina sy mahay dia tsy maintsy.
Ny famolavolana fahatokisana an-dranomasina dia manome fiarovana be dia be amin'ny fanadihadiana tsy miankina, ny ady, ary ny ady an-trano. Tokony ho hita fa ny vidin'ny fananganana sy ny fikojakojana dia azo raisina, ny fametrahana ny Ny fahatokisana an-dranomasina dia hanome fiadanana ho an'ireo izay mikasa ny hiaro ny fananany ara-bola na hanomezany ho an'ny zanany mandritra ny fotoana maharitra.